Mpamatsy horonan-tsarimihetsika fampifangaroana & famahanana milina | YiZheng
ny Diso mitsangana fampifangaroana fahanaer Masinina dia ampiasaina mba hanome sakafo ara-dalàna ny akora amin'ny fitaovana mihoatra ny roa amin'ny fizotry ny famokarana zezika. Izy io dia manana ny mampiavaka ny firafitra mifangaro, ny famahanana fanamiana ary ny fisehoana tsara tarehy. Misy seranan-tsambo roa mihoatra ny roa ao ambanin'ny kapila, izay mahatonga ny famoahana tena mety.
Ampiasaina inona ilay masinina fampifangaroana Disc Vertical Disc Mixer?
ny Diso mitsangana fampifangaroana fahanaer Masinina antsoina koa hoe feeder disk. Ny seranana fandefasana dia azo fehezina malefaka ary ny habetsahan'ny famoahana dia azo ovaina arakaraka ny tinady famokarana. Ao amin'ny tsipika famokarana zezika mitambatra, nyMasinina fampifangaroana fampifangaroana disk mitsangana dia ampiasaina matetika miaraka amina granulator extrusion roller maromaro hanomezana sakafo ara-materialy, izay manatsara ny fahombiazan'ny sakafo sy ny fahaizan'ny famokarana
Endri-javatra amin'ny milina fampifangaroana vongana fampifangaroana disk
Ity masinina ity dia feeder fampifangaroana disk mitsangana vaovao, izay misy lovia fampifangaroana, seranan-tsambo, fampifangaroana sandry, talantalana, boaty ary fitaovana fampitana. Izahay dia mandray firavaka mitafy manokana amin'ny lelan'ny tadiny mandritra ny fotoana lava. Ny kapila mampifangaro feeder dia manome sakafo avy any ambony ary avoaka avy any ambany miaraka amina rafitra mirindra. Ny mampiavaka ny masinina dia ny faran'ny vongan-tsambo misy ny reducer dia mitondra ny zana-kazo lehibe manetsika mba hiasa, ary ny tohatra mampihetsi-po dia manamboatra nify mampihetsi-po, noho izany ny hazo mikorontana dia manosika ny nify mampihetsi-po mba hampifangaroana tsara ny fitaovana ary mahatonga ny fitaovana hivoaka mirindra. Ny seranan-tsambo dia azo sokafana arak'izay ilaina mba hifehezana ny fikorianan'ny fitaovana hiantohana ny famokarana milamina ny fizotrany manontolo.
Fampiharana masinina fampifangaroana horonan-tsarimihetsika mitsangana
Izy io dia karazana vaovao fampifangaroana & famahanana fitaovana ho an'ny hazakazaka mitohy. Ampiasaina indrindra amin'ny indostrian'ny fanodinana zezika izy io, ary manome ny tetik'asa zezika mifototra amin'ny famolavolana, manomboka amin'ny famolavolana, famokarana, fametrahana, debugging ary fiofanana ara-teknika. Izy io koa dia azo ampiasaina amin'ny simika, metallurgy, fitrandrahana, akora fananganana ary indostria hafa.
Mampiavaka ny fampisehoana
(1) Ny Diso mitsangana fampifangaroana fahanaer Masinina manana fiainana maharitra, fitsitsiana angovo, habetsahan'ny boky, hafainganam-pandeha haingana sy asa mitohy.
(2) Ny atin'ny kapila dia azo zahana plato polypropylene na takelaka vy tsy misy fangarony. Tsy mora ny mifikitra amin'ny fitaovana ary mitafy fanoherana.
(3) Ny reducer cycloid pinwheel dia mahatonga ny masinina hanana ny mampiavaka ny firafitra mifangaro, ny fandidiana mety, ny fanamiana ara-dalàna, ary ny fivoahana sy fitaterana mety.
(4) Ny Diso mitsangana fampifangaroana fahanaer Masinina mamelona ny fitaovana avy any ambony, mivoaka avy any ambany, izay mitombina.
(5) Ny famehezana eo anelanelan'ny faritra mitambatra dia tery, ka milamina tsara ny milina.
Fampisehoana horonantsary fampifangaroana horonan-tsarimihetsika fampirantiana vertika
Parameter teknika fampifangaroana vilia mitsivalana
Haavo avo (mm)
Hafainganana (r / min)
Teo aloha: Separator fisarahana ranoka matevina
Manaraka: Milina fampidinana & famahanana
Fampidirana Inona ny milina fametahana zezika mandeha ho azy? Fitaovana fametahana zezika mandeha ho azy dia ampiasaina amin'ny fandanjana marina sy ny fanaovana dosie miaraka amin'ny akora betsaka amin'ny tsipika famokarana zezika mitohy mba hifehezana ny habetsaky ny sakafo ary hiantohana ny famolavolana marina. ...